Myoe Pya - SHARRTZ.ORG
The MyoePya Platform has been developed by Sharrtz.org after making research and analysis of people’s needs since 2020
In 2021, Open Doors was launched as an online program based on the MyoePya Platform for buying and selling real estate and properties.
In April 2022, version 1.0.0 was published for Virtual Thingyan.
What is Myoe Pya?
အိမ်ခန်း၊ဆိုင်ခန်း၊ရုံးခန်းတွေကို ရောင်း/ဝယ်/ငှား လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် လူကိုယ်တိုင်အပြင်မှာသွားကြည့်သကဲ့သို နေရာ၊ ဒေသအသီးသီးက အဆောက်အဦးပေါင်း များစွာကို 3D AR နည်းပညာဖြင့် တစ်နေရာထဲ တစ်ချိန်ထဲမှာ ရွေးချယ်လိုရမည့် App တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Myoe Pya isaplatform where people can find suitable buildings and places of different places with intelligent technology such as 3D, AR, and location systems.
Who can use Myoe Pya?
အဆောက်အဦးနေရာ ရောင်းချ/ ငှားရမ်းလိုသူများ၊ Construction များ၊ Real Estate Agency များ၊ Hotel and Tourism Agencyများ၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းအဆောက်အဦးများ၊ ကုန်ပစ္စည်း ရောင်း၀ယ်လိုသူများ အစရှိသော Agency များနှင့် အဆောက်အဦးပိုင်ရှင်များ အတွက် အထူး သင့်လျှော်ပါတယ်။
တစ်နေရာတည်းမှာ အစုံအလင် ကုန်ပစ္စည်း ရွေးချယ် ၀ယ်လိုသူများ အဆောက်အဦး ဝယ်လိုသူများနှင့် ငှားလိုသူများ နေထိုင်ရန် အတွက် အသေးစိတ် ရွေးချယ်လိုသူများ အဆောက်အဦး ဒီဇိုင်းများကို လေ့လာလိုသူများနှင့် ကမ္ဘာအနှံအပြားမှ အဆောက်အဦးများကို အစမ်းကြည့်ရှုလိုသူများ အတွက် အထူး သင့်လျှော်ပါတယ်။
Why should we use Myoe Pya?
End User တွေအနေဖြင့် Agency နှင့် Website တွေအစား Myoe Pya မှာ အဆောက်အဦးရှာဖွေပါက မိမိတိုနေအိမ်ထဲမှာတင် အဆောင်အဦးပေါင်းများစွာကို 3D နည်းပညာဖြင့် အပြင်မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုသကဲ့သို့ တစ်ထိုင်တည်း ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Developer များအတွက် မိမိတိုရဲ့တိုက်ခန်း အဆောင်အဦးတွေကို ပုံမှန် Website တွေ ဓါတ်ပုံတွေ အစား 3D ပုံစံပြောင်းလဲပြီးတော့ မြိုပြ Platform ပေါ်မှာ ပြသခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုတိကျသော အဆောက်အဦးပုံစံတွေကို နေရာဒေသအသီးသီးမှ End User များထံ အရောက်ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအတွက် Developer တွေရော End User တွေပါ အချိန်ကုန် ငွေကုန်အလွန်သက်သာပြီး စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မှု နည်းစွာဖြင့် အဆောက်အဦးများကို လျင်လျင်မြန်မြန် ထိထိရောက်ရောက် အရောင်းအဝယ် ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
How much we cost for using Myoe Pya?
Mobile Application ကို App Store နှင့် Play Store တိုမှာ မည်သူမဆို Free Download ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Developer user များအတွက် Location data, Building Information & 3D uploading များကိုလဲ အခမဲ့ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အချက်အလတ်တွေအတွက် MP Terms and Policies တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
End User တွေအနေနဲ့ App Store သို့မဟုတ် Play Store တို့မှာ Mobile App ကို Download ပြုလုပ်ပြီး အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Developer user များ အနေနဲ့ အဆောက်အဦးများကို Register ပြုလုပ်လိုပါက MPLR program ကို Myoe Pya Account နှင့် အခမဲ့ ဝင်ရောက် နိင်ပါတယ်။ အ‌ကောင့် ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်နှင့် Tutorial video များကို SHARRTZ YouTube Channel နှင့် Help Center တွင်ဝင်ရောက် ‌‌လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက email သို့မဟုတ် Developer Telegram Channel သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Join MPLR Program
Register Myoe Pya Location Register (MPLR) program to upload your building data in MYOEPYA AR Map. Registration is free. Before joining the MPLR program, make sure you haveaMP Account registered on your mobile phone.
MyoePya platform got partnership with AEG for the purpose of extending in e-commerce system,
using their ERP System (in purchasing session) and developing the platform by their marketing support.
Learnings and Tutorial
Myoe Pya Version History